Deakin University - Higher Education na Australian unviersities
Deakin University Nkọwa
acronym : IHE
tọrọ ntọala : 1974
Students (ihe ruru.) : 51000
Echefukwala atụle Deakin University
Idebanye aha na Deakin University
Deakin University bụ a ọha mahadum na mkpokọta 50,644 elu-akụziri ụmụ akwụkwọ na 2014. guzosie ike na 1974, na University aha mgbe onye ndú nke Australian gọọmenti ije na mba abụọ Prime Minister, Alfred Deakin. Ọ nwere campuses na Geelong, Warrnambool na Burwood, Melbourne na mmụta emmepe na Dandenong, Craigieburn na Werribee, niile dị na steeti Victoria. Ọ na-e chie guzosie ike 1974 na Itie nke Deakin University Act 1974. The ire ofStonnington mansion kpasue ọha iwe ka ọ na-etinye aka na mansion nke bụ n'ihe ize ndụ nke redevelopment site onwunwe mmepe. Deakin bụ otu n'ime Australia kasị na-eto eto nnyocha mahadum. Ya jikọtara research ego arịwo elu site A $ 4.5 nde ke 1997 ka A $ 43,4 nde ke 2014.
Site ya burukwa NDỊ n'ọdịnihu, Deakin Aims iji wuo ọrụ nke ga-eme n'ọdịnihu, eji ohere nile dijitalụ afọ iji nwetakwuo ohere agum akwukwu na-eme ka a dị iche na obodo ọ na-eje ozi.
Deakin arụ a aha nke ịbụ inweta, -enye aka na enyi na enyi. Ọ nwere a longstanding ndekọ maka ojiji nke ọnwụ onu ọmụma technology mgbe na-enye ukwuu ahaziri ahụmahụ, ma na ígwé ojii na Deakin si media-ọgaranya campuses ma ọ bụ site a zọpụta nke ígwé ojii na campus mmụta.
Deakin nwere n'elu 53,000 ụmụ akwụkwọ, na ọ fọrọ nke nta a nkeji iri na ise na-ahọrọ na-amụ Foto ojii (online).
Deakin e ọdịda a 5-kpakpando fim site prestigious mahadum ranking nzukọ Quacquarelli Symonds (QS); na fim na-egosi Deakin bụ ụwa-klas na a sara mbara elu ugwu nke ebe, nwere ọnwụ onu ụlọ ọrụ na bụ mba na-ede ude nnyocha na izi.
The 2015 Shanghai Jiao Tong Ọmụmụ ọkwa nke World Universities(ARWU) enịm Deakin University otu n'elu 400 mahadum ke ererimbot. Ogo emen research mmetụta nke ọtụtụ puku agụmakwụkwọ oru n'ụwa nile na nwere otu na-elekwasị anya na sayensị. N'ihi na a na-eto eto na mahadum dị ka Deakin nke researches gafee a na nso nke ọzụzụ ma na nwere ike na-elekwasị anya na-ezi mma, ogo egosipụta Deakin si na-aga n'ihu nkwa na-eto eto n'ụwa na-eduga nnyocha.
Deakin n'ohu 36 na QS ranking nke ụwa mahadum n'okpuru 50 afọ.
Deakin bụ ugbu a na n'elu 3% nke ụwa mahadum nke ọ bụla n'ime atọ isi mba rankingsAcademic ọkwa nke World Universities (ARWU), Times Higher Education na QS World University Rankings.
na 2015 Kacha mma na Research maka Australia (Eyo) ranking, 89% nke Deakin si research e gosiri na ọ bụ n'elu ụwa ọkọlọtọ. Ise nke Deakin si eme nnyocha ka a gụnyere na Thomson Reuters kwa afọ ndepụta nke na-eme nnyocha kasị e zoro aka na agụmakwụkwọ magazin, họọrọ na n'elu otu pasent nke na-eme nnyocha na ha na ubi. The depụtara na-eme nnyocha na-: Alfred Deakin prọfesọ David Crawford, Jo salmon, Kylie Naa na Associate prọfesọ Anna Timperio, niile si Deakin si Centre maka Mmega Ahụ na Nutrition Research (C-pan), na Alfred Deakin Prọfesọ Michael Berk, Director nke Centre maka Innovation na uche na nke anụ Health na Clinical Ọgwụgwọ (mmetụta).
Deakin nọgidere na-abụ a ndi oru ndú maka gụsịrị akwụkwọ na afọ ojuju, akpa ke Victoria maka isii consecutive afọ na Australian Ukpep Survey (2010-15).
Faculty of Arts na Education
School of Communication na Creative Arts
School of Humanities na Social Sciences
Faculty of Business na Iwu
Deakin Iwu School
School of Mmega Nutrition Sciences
School of Nursing na midwifery
Faculty of Science, Engineering na Wuru Environment
School of Architecture na Wuru Environment
School of Life na Environmental Sciences
Deakin akụkọ ihe mere eme
Mgbasawanye na 1990s
Iwuli a University Town
Deakin University e chie ike 1974 na Itie nke Deakin University Act 1974.
Deakin bụ Victoria nke anọ mahadum na mbụ na mpaghara Victoria; ya aha mgbe onye ndú nke Australian gọọmenti ije na Australia nke abụọ nke Prime Minister, Alfred Deakin.
Si ya mmalite, Deakin e ekara site ejima mgbaru ọsọ:
a na-elekwasị anya na mpaghara Victoria, eke a mahadum maka Geelong region
a nkwa na-ebuwanye ibu ohere mahadum ọmụmụ, akpan akpan site anya usoro mmụta.
Deakin University mbụ campus e guzobere na Waurn ponds. The University bụ n'ihi nke mmakọ n'etiti State College of Victoria, Geelong (n'oge gara Geelong Teachers College) na Gordon Institute of Technology (ugbu a na Gordon Institute of TAFE).
Deakin debara aha ya mbụ ụmụ akwụkwọ na Geelong Waurn ponds Campus na 1977.
Deakin e sikwuo ike site a usoro nke ọma mergers na ike mmekọ, ọ bụla nke onye so budata Deakin uma na obibia.
Australia si tertiary usoro agụmakwụkwọ wara isi mgbanwe na-eso 1988 White Akwụkwọ Higher Education: a iwu kwuru, ẹkenam site mgbe Labor Education Minister John Dawkins.
Dị ka ọtụtụ Australian mahadum n'oge, Deakin malitere a usoro nke mergers. Ọ jikọrọ ya Warrnambool Institute of Advanced Education na 1990, ike Deakin itie na Western District nke Victoria na Warrnambool Campus.
A mmakọ na ọtụtụ n'ime Victoria College na December 1991, na ya campuses na Burwood, Rusden na Toorak, nyere ọhụrụ Deakin a ike mepere ọnụnọ na Melbourne Burwood Campus.
Ndị a mergers nyeere Deakin University na-eto eto n'ụzọ si a tupu mmakọ na-amụrụ bi dị 8,000 in 1990 ihe dị ka 25,000 elu-akụziri ụmụ akwụkwọ na 1995.
n 1990s, e nwere ọtụtụ arụmụka banyere akara aka nke Geelong si akụkọ ihe mere eme ma dilapidated Dalgety si Woolstore. Si na-wuru dị ka woolstores na 1893, ndị ụlọ ọtụtụ rụzigharịa ike Deakin nke oge a na nnukwu Geelong waterfront Campus.
Ị chọrọ atụle Deakin University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Deakin University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Deakin University.
Ndị ọzọ na mahadum na Australia